वैदेशिक रोजगारी पूरै बन्द हुन्छ भन्ने कुरा गलत
Sun, Apr 22, 2018 | 03:05:10 NST
12:12 PM (4 months ago)
काठमाडौं, पुस २ – देशभित्र मात्रै होइन, अहिले नेपाली पुगेका सबै देशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको मतपरिणामका विषयमा चर्चा भइरहेको छ । यो मतपरिणामलाई कतिले अचम्मलाग्दो भनेका छन्, कतिले नयाँलाई अवसर र पुराना पार्टीले सुध्रिनुपर्ने जनमतका रुपमा ब्याख्या गरिरहेका छन् ।
सात समुन्द्रपारी बसेर झण्डै ५० लाख जना नेपालीले पनि यो चुनाव र मतपरिणामबारे चासो राख्नु स्वभाविकै भयो । सही नीति निर्माण र कार्यक्रम लागु भएर कार्यान्वयन भएर देशमा नै रोजगारी पाउने अवसरको पर्खाइमा छन् धेरै परदेशी नेपाली ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न र देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न के काम गर्छ भन्ने विषय धेरैको चासो छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत ल्याएको छ । त्यसैले आउँदो सरकार वाम पार्टीहरुले बनाउने पक्का जस्तै भएको छ ।
स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न वाम गठबन्धनको सरकारले के गर्नुपर्ला भनेर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नेकपा एमालेको उद्योग तथा वाणिज्य विभागका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर तामाङसित रीतु थेबेले गरेको कुराकानी ।
वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएजस्तै अब बन्ने सरकारले काम गर्ने हो भने म्यानपावरको व्यापार चौपट हुने होला ।
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा स्वदेशमा नै रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा आइसकेको छ । त्यसले म्यानपावर व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने होइन । भोली गएर आर्थिक अवस्था राम्रो भयो, रोजगारी सिर्जना भयो भने देशको जनशक्तिले काम पाउने हुन्छ ।
देशकै जनशक्तिले नपुग्ने भए विदेशबाट पनि कामदार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । खाडी मुलुकमा हेर्ने हो भने युरोप अमेरिकाको मानिसहरु काम गर्न आएका छन् । त्यसकारण वैदेशिक रोजगार पूरै बन्द हुन्छ भन्ने कुरा गलत हुन्छ । हामीले अहिले अदक्ष कामदार पठाइरहेका छौं ।
भोली गएर दक्ष कामदार पठाउने र देशमा पनि दक्ष कामदार भित्र्याउने काम हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा युवा पठाउन हुन्न भन्ने कुरालाई स्वागत गर्न चाहन्छु । देशमा नै रोजगारी सिर्जना भयो भने घरमै बसेर रोजगारी पाउनु भनेको ठूलो कुरा हो ।
रोजगारीका लागि दक्ष कामदार पठाउन हामीलाई कति समय लाग्छ ?
वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा हामीले प्राविधिक विषयलाई जोड दिने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने छ । केही नभएपनि प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ भन्ने हिसावले घोषणापत्र ल्याइएको छ । त्यसअनुसार नेपालमा नै काम पाउने वातावरण बन्छ ।
धेरै प्राविधिक जनशक्ति तयार भएछ भने पनि उनीहरु राम्रो काम र कमाईमा विदेश जान सक्ने अवस्था रहन्छ । तर दक्ष जनशक्ति आजको भोली नै तयार हुन्छ भन्ने होइन । नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
त्यो भनेको सबै ठाउँमा पक्की सडकको सञ्जाल हुनुपर्छ । अहिले पनि धेरै ठाउँमा हिँड्नु पर्ने, सडक प्रयोग गर्नै नपाउने अवस्था छ । त्यो दयनीय अवस्था हटाउनुपर्छ । कमसेकम गाउँपालिकाको वडा तहसम्म कालोपत्रे सडक पुग्नुपर्छ । गाउँपालिकाको सबै क्षेत्रमा सडक नपुगेसम्म विकासको अरु परिकल्पना गर्न सकिन्न ।
अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशभर तीन वटा भन्दा धेरै निर्माण गर्नुपर्छ । पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग बन्नुपर्छ । यातायातसँगै उर्जाको विकास पनि त्यत्तिकै हुनुपर्छ । काठमाडौं मात्रै लोडसेडिङ मुक्त भएर भएन । गाउँ गाउँमा बिजुली पुर्‍याउनुपर्छ ।
उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि उर्जा उत्पादन नगरी हुँदैन । त्यसकारण उर्जा, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बन्द हुन्छ भन्ने होइन । ५ वर्षमा न्युनतम कुराको विकास हुन सक्यो भने आधारभूत कुराहरु पूरा हुन सक्छ । र १५ वर्षभित्र विकसित देशको रुपमा पुग्छ भन्ने हो ।
नयाँ सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ ?
वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न ऐन नियमहरुलाई समयसान्र्दभिक बनाउनुपर्छ । आज भिसा आयो भने भोली नै विदेश जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेश गएकालाई सुरक्षित बनाउन गन्तव्य मुलुकको सरकारसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने सुरक्षा, स्वास्थ्य, तलब सुविधा तोक्न सकिने भयो ।
वर्षेनी लाखौं युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । उनीहरुका लागि तत्कालै रोजगारी दिन देशभित्रै के गर्न सकिएला ?
तत्कालै त्यो अवस्था त देखिन्न । उर्जाको विकास नगरी उद्योग चल्न सक्ने अवस्था हुन्न । उत्पादन भइहाले पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसैले उर्जा उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । उर्जा सस्तो भयो भने अरु उत्पादन पनि सस्तो हुन्छ ।
त्यसो भयो भने भारत र चीनको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सडक र उर्जाको विकासका साथै प्राविधिक जनशक्ति तयार नभएसम्म धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्दैन ।